Rita, Writing for My Sake!: God Father
Posted by Rita at 11/27/2009 12:31:00 AM
ဒီစာသားကို ဒေါ င်္အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ အရမ်းလဲသဘောကျတယ်။ ဘယ်မှာလဲတော့လဲ မသိတော့ဘူး။ ရီတာ့ စာထဲက (ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ တွန်းပို့တာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက်တော့ အနစ်နာခံတယ်၊ စတေးတယ် ဆိုပြီး အသံကောင်း ဟစ်နေတာ ကြားရရင် အန်ချင်တယ်။
)ဒီအပိုဒ်လေးနဲ့ တော်တော်အပ်စပ်တယ်။ အဲဒါ ဂေါ့ဒ်ဖားသား ထဲကစာသားလား။ ရီတာ့ ဆီမှာ မမန့်ဖြစ်ပေမယ့် အသစ်တင်တိုင်းလာအားပေးနေပါတယ်။ မောင် ကိုကို နှင့် မရီတာများရေးပြီလားဆိုပြီးပေါ့း)
Your comment on God Father is reasonable.
I had watched this movies Part I,II,II many time.
But I can't detail describe it as you.
I like that movies so much.
Well come to discuss other movies.
We Own The Night ဆိုတဲ့ကားကိုလည်း ကြည့်ပါလား.. မိုက်တယ်.. အဲ့ကား ဘာသာပြန်ရတုန်းက အရမ်းကျေနပ်ခဲ့တာ..
ဂေါ့ဒ်ဖားသားလောက်တော့ မကောင်းပါဘူး နန်းညီရာ ... ဂေါ့ဒ်ဖားသားက တကယ့်ကို ဂန္တ၀င်
ဗမာမင်းသား မင်းသမီးတွေက သရုပ်ဆောင်တာထက် စကားတွေရွတ်ပြကြတာလေ ..အဲ့ဒါ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးဓလေ့နဲ့တူတယ်ဗျ...
JeuJue >>> မောင် ကိုကို နဲ့ မရီတာ ဆက်ရေးပါမယ်။ ပြောပြန်ပြီ =)
အဲဒီကားကို ကြည့်ရင်း အဲဒီ အခန်းလဲ ရောက်ရော ဘယ်မှာမှန်းမသိ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဒီ စာသားကို သွားပြီး သတိရလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ အဲဒီအတွေးကို ချရေးလိုက်တာ။ အဲဒီစကားဟာ သိပ်ပြောသင့်တယ်။
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြန်မပြောနဲ့လို့ ကိုယ် ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောပြပါမှ ကျန်တဲ့လူတွေ သိမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ပြောပုံပြောနည်းနဲ့ ပြောရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လိုသေးတယ် မဟုတ်လား။
ငါတို့ ဒါတွေ လုပ်ခဲ့ရတာဟေ့ နင်တို့က ဘာလုပ်ခဲ့ရလို့လဲ ဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုးတော့ လာ ချိုးလို့ မသင့်တော်ဘူး မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခံစားချက်တခုခုတော့ ပါစမြဲ မဟုတ်လား။ ပြောလိုက်၊ ရေးလိုက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ အဲဒီခံစားချက်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလဲ ဘေးလူတွေက ကူးစက်ခံစားလို့ ရတာပဲ မဟုတ်လား။
ငါ့စကား နွားရ တွေတော့ ကိုယ် တကယ်ပဲ အန်ချင်တာ။
Uncle Bino >>> II နဲ့ III ကို တွေ့ပေမယ့် မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး အန်ကယ်။ ဇာတ်လမ်းကို မသိတာနဲ့။ ကြည့်ပြီးတဲ့ကားတချို့အကြောင်း ရေးပါဦးမယ်။
နန်းညီ & little brook >>> နန်းညီ ညွှန်းတယ်ဆိုတော့ တွေ့ရင် ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဦးမယ်။ ပြီးမှ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ ပြောမယ်။ =)
တစ်ခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကြည့်ကောင်း တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ နာမည် ဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ညီမက ဇာတ်လမ်းသာကြည့်ချင်တာ ဘယ်ကားကြည့်ရမှန်းမသိ လို့။ ကျေးဇူး
shwe >>> ကိုယ်လဲ ရုပ်ရှင် fan မဟုတ်တော့ သိပ်မညွှန်းတတ်ဘူး ညီမလေးရယ်။ ဒီ link လေးကိုတော့ သွားကြည့်လိုက်ပါဦး။ အဲဒီမှာ ko boyz က list လုပ်ထားတယ်။ သူညွှန်းတယ်ဆိုတော့ ကောင်းလို့ ဖြစ်မှာပါ။
အ တယ်ပြောရင် ခံရမှာပဲ။ GodFather ကိုနာမည်ပဲ ကြားဖူးပြီး စာအုပ်လည်း မဖတ်ဖူးဘူး ရုပ်ရှင်လည်း မကြည့်ဖူးဘူး
ယောက်က်ျားလေးဖြစ်ပြီး တုံးလိုက်တာ၊ ဂေါ့ဖာသား တောင်မကြည့်ဖူဘူးတဲ့
ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင် ဆောင်းပါးကောင်းတပုဒ်ပါ
ဆွေးနွေးချက်တွေ ကြည့်သူအမြင်တွေထည့်ရေးတာလဲ ကြိုက်တယ်
ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အော်တိုင်းမ်ဖေးဘရိတ်တွေပဲ
ပရိုက်အန် ပရဲဂျဒစ် ကို
၂၀၁၂ ကတော့ စိုးစိုးပါ
ဟိုဘတ်ခန်းမှာ ရှိတဲ့ ကေးနဲ့ တံခါးလေးကအဖြေးဖြေးပိတ်သွားပြီး...
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေ စာအုပ်တွေထဲက တခုပါပဲ